Uvalo ngokubulawa kwabantu eDambuza | Eyethu News
Uvalo ngokubulawa kwabantu eDambuza
“Ikhansela lithi kuzoqiniswa ezokuphepha kulendawo.”
basale bedindilize kanje abalisa abathathu nowesifazane ngemuva kokudutshulwa ngoMgqibelo eDambuza. Isithombe Sithunyelwe.
AMALUNGA omphakathi waseDambuza athi aselala obenyoni ebusuku kulandela izigameko zokubulawana ezenzeka kulendawo.
Esikhathi esingaphansi kwamasonto amabili sekudutshulwe kwabulawa abantu abahlanu kulendawo kanti abasolwa kuze kube imanje abakatholwa.
Ngesonto eledlule kudutshulwe kwabulawa uMoja K Magwaza owadutshulwa wabulawa ngaphandle kwesango lakubo. Ngempelasonto kudutshulwe abalisa abathathu kanye nowesifazane nokuthiwa babehambele umlindelo wakhe uMoja obefihlwa ngempelasonto.
Elinye ilunga lomphakathi elingathandanga ukudalulwa igama lithe sebesaba ngisho ukuhlala kulendawo ngendlela ekwenzeka ngayo.
“Ukukhuluma iqiniso nje siyesaba manje ngokubulawa kwalabafana. Okubuhlungu kakhulu ukuthi abanye babo akubona abakulendawo kodwa bafika bezoqasha kulendawo uma sebeshonile bahambe bayongcwatshwa emakubo. Usaba ngisho ukuthi uzothi usamile udutshulwe , ngisho izingane zethu azisaphephile makunje,” kubeka lona.
Elinye lithe sebesaba ngisho ukuphumela emnyango ebusuku ngoba bangase bathuke nabo sebedubuleka ngoba lendawo isiphenduke kwashaya sibhamu.
IKhansela lakulendawo uMnu Sipho Madonda uthe bakhathazekile kakhulu ngokwenzeka kulendawo wathi sebezoqinisa ezokuphepha ikakhulukazi njengoba kuza isikhathi sephasika.
“ Kusiphatha kabi okwenzeka lapha kulendawo asihambisani nako lesi senzo sokubulawa kwabantu siyasigxeka kakhulu asihambisani naso . Ngidabukela kakhulu imindeni elahlekelwe , kodwa sesihlangene ukudingida ukuthi into esizoyithini lena. Sesihlanganise izinhlangano zokuphepha emphakathi sihlangene nomphathi siteshi wasePlessislaer ukuqinisa ezokuphepha kulomphakathi. Sekuzoba khona izinhlangano zokuphepha kusuka manje kanye namakomidi ezemigwaqo azohlola lendawo,” kubeka yena.
Uqhube wathi nakuba enganalwazi olugcwele ukuthi lokubulalana kusukaphi kodwa bayalwisana nobugebengu kulendawo.
Uphethe ngokuthi anxuse umphakathi ukuthi ungazithatheli umthetho ngezandla kodwa uyekele emaphoyiseni ukuba enze uphenyo ukuze kuboshwe lezi zigilamkhuba.
Funda olunye udaba : Bacela usizo abashiselwa umuzi ngoba besolwa ngokuthakatha
OwaseMlazi uthwele isicoco sokugqokisa abesilisa